Nidaam gudbinta ra’iyadda iyo xalinta dacwada
Sida laga soo xigtay Cutubka 4aad. qodobkiisa 8aad ee qanuunka iskoolaadka ee la asaxiyay 1 luulyo 2011, ayaa la rabaa in ay jiraan nidaam lagu xaliyo dacwooyinka: "Hoggaamiyaha waa in laga helo qoraal ku saabsan nidaam markasta loo maro ee qaabilida iyo baaritaanka dacwooyinka ee loo qabo waxbarashada. Warbixintaas oo ku saabsan nidaamkaan waa in loo helo meel ku haboon."
TALLAABADA 1: Ugu horeyn cabashada waa in shaqaalaha ay khusayso ay xaliyaan
Xanaana kasta waxay leedahay qof gaar ah oo mas'uul guud ah kaas oo soo dhawaynaya ra'yadiina iyo wixii dacwo aad qabtiin.
TALLAABADA 2: Haddii dacwadaada tallaabada ugu horreysa lagu xalin waayo
Haddii aadan ku qanacsanayn sida talabaada koowaad arrinta lala qadaddhigay, waxaad arrinka u gudbin kartaa sheefka xanaanada (Rinkeby Aicha 0707290071 Tensta/Husby/Kvarnby Fardowsa 0767407644) oo dib u eegis cusub iyo qiimayn ku samaynaya habka xal raadiska loo soo maray.
TALLAABADA 3: Haddii dacwada ay xal u wayso sheefka xanaanada
Haddii aadan ku qanacsanayn sida sheefka xanaanada u xaliyay arrinta, waxaad la xiriiri kartaa hoggaamiyaha xanaanada (08-36 82 10) oo dib u eegis iyo qimayn cusub la imaanaya.
TALLAABADA 4: Haddii dacwada uu hoggaamiyaha xal u waayo
Haddii aadan ku qanacsanayn sida hoggamiyaha arrinta uu xaliyay, waxaad la xiriiri kartaa wasaarada Waxbarashada (08-508 33 000) oo arrintaada qiimayn cusub ku samaynaysa. Tanu waa maamulka ugu sarreeya ee degmada ee dacwooyinka.